SMB भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » एस बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» SMB
SMB को संक्षिप्त रूप हो सानो र मध्यम आकारका व्यवसायहरू.
साना र मझौला आकारका व्यवसायहरू निश्चित आकारका संस्थाहरू हुन्, या त कर्मचारीहरूको संख्या वा वार्षिक राजस्व। यदि कर्मचारी गणना द्वारा मापन गरियो भने, साना व्यवसायहरू 100 भन्दा कम कर्मचारीहरू भएका र मध्यम आकारका उद्यमहरू 100 देखि 999 कर्मचारीहरू भएका संस्थाहरू हुन्। यदि वैकल्पिक रूपमा वार्षिक राजस्वद्वारा मापन गरियो भने, तिनीहरू वार्षिक राजस्वमा $50 मिलियन भन्दा कम र मिडसाइज वा $50 मिलियन भन्दा बढी तर $1 बिलियन भन्दा कम कमाउने संस्थाहरू हुन्। संक्षिप्त नाम SME संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर द्वारा प्रयोग गरिन्छ।